Prince Kuhio Day makes Hawaii Tourism Authority forget rising COVID-19 numbers | Hawaii Travel News
Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Princebọchị Prince Kuhio na-eme ka Hawaii Tourism Authority chefuo ọnụọgụ COVID-19
Princebọchị Prince Kuhio na-eme ka Hawaii Tourism Authority chefuo ọnụọgụ COVID-19
US State of Hawaii dabere na njem na njem ụlọ ọrụ. Ndị njem ji nwayọ na-erute n'ọnwa gara aga ma e jiri ya tụnyere oge ọ bụla na-efe efe. Nke a ọ ga-adịgide?
Ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa nke Hawaii si na US Mainland nọ na-abawanye ịdekọ nọmba na izu 4 gara aga
Hawaii dekọtakwara otu ụbọchị ndekọ taa gbasara ọnụ ọgụgụ ọhụrụ nke COVID-19 maka ihe karịrị otu ọnwa
Princebọchị Prince Kuhio bụ ihe nnabata maka ndị isi na-eme njem nleta na-eme ememme ma na-agbachi nkịtị na ọnọdụ a na-emepe emepe maka njem njem njem na njem na Hawaii, akụnụba akụ na ụba, na ọnọdụ ahụike.
Ọ bụ ụbọchị Prince Kūhiō na Hawaii taa, ndị ọrụ gọọmentị enweghị ike ịzaghachi ma ọ bụ kwuo maka oke egwu dị na ọrịa COVID-19 na Aloha Steeti gafere ụbọchị abụọ gara aga. Hawaii abanyela ugbu a na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ nke na-aga yana ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mbịambịa si na mpaghara US maka izu ole na ole gara aga. Taa, steeti dekọtara okwu ọhụrụ 126.
Onye ọnụ na-ekwukarị na Honolulu Mayor Rick Blangiardi gwara eTurboNews na nkwupụta:
Oahu ka no na Tier 3 metric nke usoro imeghari. Obodo na-enyocha ọnọdụ ndị dị ugbu a ma ghota na e nweela nsogbu na COVID-19 dị mma n'izu gara aga na O'ahu. Ahụike ọha na eze bụ ihe kacha mkpa na Obodo na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na Ngalaba Ahụike na ndị ọka mmụta ahụike iji chọpụta ihe egwu dị ugbu a ma mee mgbanwe dịka ọ dị mkpa. Anyị na-aga n'ihu na-emepe akụ na ụba n'enweghị nsogbu ọ bụla na-ekwe ka ọtụtụ ndị laghachi ọrụ. Ndị obodo ga-ejikọ aka ọnụ iji gbochie mgbasa nke nje ahụ site n'ịnọgide na-eyi ihe nkpuchi, na-anọpụ iche n'ụzọ anụ ahụ ma na-agbaso iwu nke usoro imeghe.
Ka ọ dị ugbu a, otu ụgbọ elu na-ekwuputa ụgbọ elu ụlọ ọhụrụ na ahịa ndị ọbịa ọzọ. Fọdụ n'ime ụgbọ elu ndị a na-arụ ọrụ site na mpaghara ndị a na-ahụta dị ka nke abụọ maka Hawaii, mana ahịa bụ isi maka Caribbean.
N'ịtụle na ndị mbịambịa si Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand amalitebeghị, ịrị elu ịtụnanya nke azụmaahịa ụlọ bụ ihe a na-atụghị anya ya nye ọtụtụ.
N'oge na-adịghị anya mmụba nke ndị ọbịa bụ akụkọ dị mma maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ebe nkiri, ụlọ nri, ụlọ ahịa na mpaghara njem, mana ọ nwere ike bụrụ ọdachi n'ime ogologo oge.
dị ka Ndị njem nleta Hawaii na-eme ememme ụbọchị Prince Kuhio taa, a gaghị enwe ihe ọ bụla kwuru banyere ọnọdụ a ruo mgbe Mọnde, Ista Monday na-atụ anya. Otu nwere ike na-atụ anya na nke a ga-abụ okwu ogbi site na Monday, dabere na ọnụọgụ ọrịa COVID-19 na ụbọchị abụọ na-abịanụ.
Ka ọ dị ugbu a Hawaii na-eme nke ọma n'ịgba ọgwụ mgbochi ụmụ amaala ya. N'ihe dị ka Mọnde, onye ọ bụla dị afọ iri isii gafere nwere ike inweta ọgwụ mgbochi ahụ, ndị otu niile dị mkpa agbanyeghị ọgwụ mgbochi ugbu a.
Kedu ihe kpatara Hawaii ji eme ụbọchị Prince Kuhio Day taa?